admin	- १३ असार २०७७, शनिबार ०८:१८
काठमाडौं, १३ असार । काठमाडौंकी १ सय ६८ किलोग्रामकी एक महिलाले स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल थापाथलीमा उनले शुक्रबार शिशुको जन्म दिएकी हुन् । बाँझोपन रोग विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोसकोपिक सर्जन डा. नूतन शर्माका अनुसार असार ११ गते ३१ वर्षीया ती महिलाको शल्यक्रिया गरेर २.९५ किलोग्रामको स्वस्थ शिशु जन्माइएको हो । ‘मेरा लागि नयाँ अनुभव हो, असाधारण तौलले गर्दा यो प्रसूति प्रक्रिया जटिल र जोखिमपूर्ण थियो,’ डा....
admin	- १२ असार २०७७, शुक्रबार १५:५९
खाएको कुरा नपचेर हैरान हुनुभएको छ भने घरमै यस्ता प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:- –अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस्। –पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ। –मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाई खाली पेटमा खाने गर्नाले अपचको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ। –खाना राम्रोसँग पच्दैन भने खाँदाखेरि बेस्कन चपाएर खाँदा पाचन...
admin	- ११ असार २०७७, बिहीबार ०९:२२
एजेन्सी– बिहान उठेपछि मानिसहरु जिम, र योगाजस्ता शारीरिक व्यायाम गर्ने गर्छन् । शरीरलाई व्यायाम गर्ने मानिसहरु मानसिक रुपमा भने कसरत गर्दैनन् । शरीरको बाँकी अंगहरुले जस्तै दिमागमा पनि थकान महसुस हुन्छ । अध्ययनका अनुसार मानिसहरुले शरीरको साथमा दिमाग पनि स्वस्थ राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै केही कामहरु गर्नेबित्तिकै तपाईंको दिमाग दिनभर फ्रेस रहन्छ जसले गर्दा तपाईंको दिन एकदमै शुभ रहन्छ । यस्ता व्यायाम गर्नाले तनाव पनि कम हुन्छ...
पायल्स रोगीले यी चिज नखानुस्
admin	- ९ असार २०७७, मंगलवार २०:५९
पायल्सबाट धेरै मानिसहरु पीडित भएपनि खुला रुपमा जो कोहीलाई भन्न सकेका हुँदैंनन् । केही उपचारले ठीक भएजस्तो भएपनि फेरि यो समस्या पुनः दोहोरिन्छ । तर खानपान र ज्ञडको परिवर्तनबाट पनि यसको समस्याबाट धेरैमात्रामा बच्न सकिन्छ । पायल्सबाट बच्न कस्तो खाना खानु हुँदैंन, थाहा पाउनुस् । धेरै तेलयुक्त र मसालायुक्त भोजन अत्यधिक तेल या मसाला भएको खाना पायल्सको समस्या भएकाहरुलाई हानीकारक हुन्छ । यद्यपि पायल्स नभएकाहरुलाई पनि डाक्टरहरु यस्तो खाना नखान...
मुटुसम्बन्धी रोगबाट जोगाउने खानेकुराहरू
admin	- ९ असार २०७७, मंगलवार २०:४४
हिजोआज हाम्रो खानपान र ज्ञडले धेरै मानिस मुटुसम्बन्धी रोगग्रस्त हुन थालेका छन् । यी खानेकुराले हामीलाई मुटुसम्बन्धी रोगबाट जोगिन सघाउँछन् । मसलाजन्य ताजा पात भोजनमा नुन र चिल्लो पदार्थको साटो हामीले प्याज, लसुन, धनियाँ, पुदिनाजस्ता मसलाका ताजा हरिया पात प्रयोग गर्न सक्छौं भने ‘टपिङ’का रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । यस्ता हरिया ताजा पातले खानेकुरा स्वादिलो त पार्छन् नै सँगसँगै स्वास्थ्य बिगार्नुको साटो मुटुलाई पनि विभिन्न रोगका जोखिमबाट जोगाउँछन् ।...
मानिसको तौल बिहानमा जोख्दा किन कम हुन्छ ?
admin	- ९ असार २०७७, मंगलवार ०९:३४
तपाइँ कतिबेला आफ्नो तौल जाँच्ने गर्नु हुन्छ ? यदि तपाई एक बिहानै तौल जोख्नु भएको छ भने तौल कम देृखाउँछ । तर, बेडमा जाने बेलासम्म तपाईंको तौल ह्वात्तै बढ्छ । आखिर किन ? एक दिनमै देखिने तौलको अन्तरका कारण कहिलेकाही तपाई तौल जोखिने साधनप्रति नै शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ होला । बिहानको समयमा तौल घट्नुको मुख्य कारण तपाईको शरिर डिहाईड्रेड हुनु हो । दुई कप मात्र पानी पिउँदा पनि शरिरको तौल...
स्मरण शक्ति तेज बनाउने एउटा यस्तो उपाय
admin	- ९ असार २०७७, मंगलवार ०८:२७
एजेन्सी– भर्खर सिकेको कुनै कुरा स्मरण गर्नु छ भने यसो गर्नुहोस्– आफूले नयाँ कुरा सिकेको ४ घन्टापछि व्यायाम गर्नुहोस् । सन् २०१६ जुलाईमा ‘करेन्ट बायोलजी’मा प्रकाशित एउटा अध्ययनका अनुसन्धानकर्ताहरूले दिएको सुझाव हो यो । उनीहरूले अध्ययनमा स्मरण शक्ति तेज पार्न नयाँ कुरा सिकेको ४ घन्टापछि व्यायाम गर्नु उपयुक्त हुने पत्ता लगाए । तर यसरी गरिने व्यायाम निश्चित समय सीमाभित्र गरे मात्र प्रभावकारी हुन्छ। अध्ययनमा सहभागी ७२ जनाले स्मरण शक्ति तेज...
उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्यो, परीक्षण चाँहि घट्यो
admin	- ९ असार २०७७, मंगलवार ०८:०३
काठमाडौं, ९ असार । सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि उपत्यकामा परीक्षणको दायरा घटेको छ । लक्षणबिना कुनै पनि व्यक्तिको परीक्षण नगरिने मापदण्ड उल्लेख गरिएको नयाँ निर्देशिका बनेपछि दायरा घटेको हो । विज्ञहरूले बढीभन्दा बढी परीक्षण गरेर संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्दै समुदायमा संक्रमण फैलन दिन नहुने सुझाव दिए पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षणका लागि दैनिक एक हजार जना पुगिरहेका हुन्छन्...